आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २७ गते बुधबार « Channel Np
मनोरञ्जन टिभी प्रवास पत्रिका स्वास्थ्य/जीवनशैली अन्तर्वार्ता अचम्म धर्म/दर्शन कृषि/प्रविधि ENGLISH loading...
आजको राशिफल – मिति बि.सं. २०७३ साल पौष २७ गते बुधबार
प्रकाशित मिति : Wednesday, January 11th, 2017 at 12:00 AM
आज श्री शाके १९३८, बि.सं. २०७३ साल पौष २७ गते बुधबार तदानुसार इश्वी सन् २०१७ जनवरी ११ तारीख : पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस – पौष शुक्ल चतुर्दशी तिथी, १९:३२ बजे सम्म चन्द्रमा मिथुन राशिमा, सूर्यमा दक्षिनायनं हेमन्त ऋतु (ज्यो. प. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर)
मेष राशि: पराक्रम बढ्ने यो रहेको छ । दाजु-भाई तथा मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य यात्रा हुने योग रहेको छ । खुट्टा तान्ने ब्याक्तिहरुबाट बच्नु पर्ने छ । नयाँ लगानिमा बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । आफन्त जनबीचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । साझेदारी काममा हात नहालेकै बेश हुनेछ । बोलीको समान्य असरले कुलकुटुम्बसंगको सम्बन्ध खराब रहला ।
मीथुन राशि: पारिवारीक झोर-झमेलाले सताउन सक्छ । मनमा आँट र शाहसको कमी हुनाले गर्न लागेको काममा सामान्य असर रहला । दाम्पत्य जीवन सुखमय बित्नेछ । साधारण चोटपटकको सामना गर्नुपर्ला । नजिकका ब्याक्तिहरुबाट धोका हुनसक्छ ।
साधारण खर्च हुने योग रहेको छ । मित्रजनहरुका निम्ती केहि लगानी गर्नुपर्ने समय रहेको छ । तपाइबाट अरु ब्याक्तिहरुले फाईदा लिन सक्छन । दाम्पत्य सुखमा केहि बाधा रहन सक्छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्ने छ ।
मनमा सामान्य डर रहेतापनि आम्दानिका स्रोतहरु मनग्य फेला पर्नेछन । साझादारी काममा भने हात नहालेकै बेश हुनेछ । बोलीमा मधुरताले छाउने छ । बौदिक ब्याक्तित्वसंगको भेटघाटको योग रहेको छ । समय मध्यम रहनेछ ।
कन्या राशि: सामान्य काममा धेरै परिश्रम र खर्च गर्नु पर्ने छ । मान्यजनहरुको साथसहयोगले मन प्रशन्न रहला । पारिवारिक मनोरन्जनको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्छ । समग्रमा दिन मध्यम रहने छ ।
तुला राशि: यात्रा कष्टकर रहला । मित्रजनहरुको भर पर्नाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ने छ । सामान्य धन मालको क्षति हुनसक्छ सजग रहनुहोला । सवारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनुहोला । आँट र शाहसमा कमी आउने छ ।
बृश्चिक राशि: निर्णय गर्ने क्षमतामा बृदि हुनेछ । साधारण चोटपटक हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बोलीको प्रभाब रहन सक्छ । मित्रजनहरुको पूर्ण विश्वास नगरेकै बेशहुनेछ । सामान्य आम्दानि भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ला ।
धनु राशि: ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा राम्रो समय रहेको छ । दाम्पत्य सुख प्राप्त हुनेछ । मन प्रशन्न रहला । मान्यजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुने छ । श्रम र परिश्रमको कदर हुने समय रहेको छ ।
मकर राशि: खुट्टा तान्ने तथा कुरा काट्ने ब्याक्तिहरुबाट बच्नुपर्ने छ । सामान्य धनमालको क्षति हुने सम्भाबना रहेको छ । यात्रामा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । गरिरहेको कामको क्षेत्रमा त्यति मन नलाग्ला । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउने छ ।
विधा क्षेत्रमा आलस्यताले सताउने छ । भोग विलासमा सनय व्यतित रहला । साधारण चोटपटकको सामना गर्नु पर्ला । सन्तानको निम्ती साधारण खर्च हुन सक्छ । दिन त्यति राम्रो देखिदैन ।
मिन राशि: सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बिशेष ध्यान दिनुहोला । पारिवारिक कलहको सम्भाबना रहको छ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता रहने छ । आय आर्जनको क्षेत्र भने समय राम्रो रहेको छ ।
भारतले कुहिएका समान नेपालमा ल्याएर बेच्छ हामी त्यहि किनेर खान बाध्य छौ र रोगि भयौ , गुल्मीमा पुगेर निदाएका नेतालाई ब्युझाउँमे भाषण गरे चन्द्र भण्डारीले : सबै नेपाली को मन छुने मन्तब्य भिडियोमा हेर्नुहोस
सनसनीपूर्ण खुलासा : पूर्वमन्त्री बुद्धिमान तामाङको दाबी ‘अबको दुई वर्षभित्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी दरबार फर्किन्छन्’(हेर्नुस भिडियो सहित)
आजको राशिफल – मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन १० गते मंगलबार
मधेशी मोर्चाले चुनाव गर्न दिन्न भनेको बेला मधेशी जनता भन्छन्- चुनाव जसरी पनि गराउनु पर्छ (हेर्नुहोस भिडियो)
'सुन साइला' भन्दै एक युवती (साइलीले)ले गाइन प्रतिउत्तरमा साइलालाई सम्झेर यस्तो गीत (भिडियो)
१८ बर्षीय भीम सुनारले बनाए ओशियन गाडी (भिडियो सहित)
यि युवतीले सुहागरातको दिन गरेको कर्तुतले दुलहाको होश हवास नै उड्यो
पल्लो कोठाको दाईले (भिडियो हेर्नुहोस्)
आजको राशिफल - मिति वि.सं. २०७३ साल फागुन ८ गते आइतबार
साउदीमा श्रीमान् हराएकी महिला को चित्कार : भन्छिन, मलाई पैसा होइन श्रीमान् भए पुग्छ, खोजिदिनुस् है !
दुई वटा योनी भएकी यी युवतीलाई पोर्न फिल्म खेल्न प्रस्तावको ओइरो